कहिले र किन गर्ने त नियमित स्वास्थ्य जाँच ? - ज्ञानविज्ञान
झट्ट हेर्दा शरीर स्वस्थ देखिए पनि कतिपय रोगहरू सुषुप्त अवस्थामा रहेका हुन्छन् । जसले दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्दा लुकेर बसेको रोग पहिचान हुन्छ र समयमै त्यस्ता रोग निर्मूल पार्न सहज हुन्छ ।
नियमित स्वास्थ्य जाँचले आकस्मिक मृत्युबाट बच्न सकिन्छ अर्थात् यस्तो सम्भावनालाई कम गर्न सकिन्छ । मानिसको आयु लामो बनाउनका लागि पनि नियमित स्वास्थ्य जाँच आवश्यक हुन्छ ।
नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउँदा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रोल, मुटुका रोग, उच्च रक्तचाप, डाइबिटिज, हर्माेन समस्या, मिर्गौलाका रोग, क्यान्सरलगायत अन्य सर्ने तथा नसर्ने रोगहरूका बारेमा अवगत हुन्छ । यस्ता प्रकृतिका रोगले लामो समयसम्म लक्षण नदेखाउन सक्छ ।
५ वर्षभन्दा कम उमेरमा नियमित स्वास्थ्य जाँच अनिवार्य छ । यो उमेरमा गराएको स्वास्थ्य जाँचले जन्मजात देखिने, बाल्यकालमा लाग्ने र पोषणसम्बन्धी रोगबारे जानकारी हुन्छ र यसलाई निर्मूल पार्न सहज हुन्छ ।
पाँचदेखि ३० वर्षको उमेरभित्र कम्तीमा एकपटक स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ । किनभने उमेर बढ्दै जाँदा एक्लोपन, डिप्रेसन, शारीरिक विकासबारे थाहा पाउन सकिन्छ ।
४० वर्षपछि पनि कम्तीमा एकपटक स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ । यसो गर्दा उमेर, वंशाणुगत र जीवनशैलीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याबारे थाहा हुन्छ । यद्यपि, ४० वर्षपछि ६–६ महिनामा चिकित्सकलाई भेटेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु राम्रो हुन्छ ।
नियमित स्वास्थ्य जाँच गराए पछि शरिरमा भएको कुनै कुनै खराबीहरु प्रारम्भिक अवस्थामा नै पत्ता लगाउँन सकिन्छ । असाध्यै भनिएका क्यान्सर लगायतका रोगहरुको पनि प्रारम्भिक अवस्थामा नै पत्ता लगाउँन सके ति रोगहरु पनि निको हुन्छन् । यसैले रोग फैलिन दिनु भन्दा पहिले नै नियमित स्वास्थ्य जाँच गरेर स्वस्थ जीवन बाँच्न सकिन्छ ।
Don't Miss it तौल सन्तुलनका लागि केहि टिप्स
Up Next कतै गलत तरिकाले खाइरहनुभएको त छैन यी खानेकुराहरू ?
फ्रिजको पानी पिउनाले हाम्रो स्वास्थमा विभिन्न असर देखा पर्छन्
१. लामो समयसम्म कब्जियत हुन सक्छ, जसले पुरै पाचनप्रणाली गडबड हुन सक्छ । आयुर्वेदमा कब्जलाई नै सबै रोगहरुको जड मानिन्छ…
One thought on “कहिले र किन गर्ने त नियमित स्वास्थ्य जाँच ?”
this news will change the life it is most importannt to read this news for human being.